Wakiilka Robert Lewandowski Oo Sheegay In Bayern Munich Aysan Wali Wadahadal La Furin Xidigan
HomeWararka CiyaarahaWakiilka Robert Lewandowski oo Sheegay in Bayern Munich aysan Wali Wadahadal la furin Xidigan
March 17, 2022 Wararka Ciyaaraha, Horyaalka Germalka, Suuqa kala iibsiga 0
Wakiilka Robert Lewandowski , Pini Zahavi , ayaa sheegay in Bayern Munich aysan wali wax wadahadal ah la yeelan kalyantigiisa oo ku saabsan heshiis kordhin.
33-sano jirkaan ayaa wax ka yar 18 bilood uga harsan tahay qandaraaskiisa haatan ee Allianz Arena kaasoo la rumeysan yahay inuu heegan galiyay kooxo badan oo Yurub ah oo ay ku jiraan Manchester City , Manchester United , Barcelona iyo Real Madrid .
Inkasta oo uu ku jiro sanadihii ugu dambeeyay ee xirfadiisa ciyaareed, Lewandowski ayaa wali ah xiddig muhiim u ah kooxda ku guulaysta Bundesliga xilli ciyaareedkan isaga oo dhaliyay 43 gool 36 kulan oo uu saftay ilaa haatan xilli ciyaareedkan.
Si kastaba ha ahaatee, mustaqbalkiisa fog ee Bayern ayaa ah mid aan la hubin, iyadoo wakiilkiisa uu shaaca ka qaaday inaysan weli wadahadalo qandaraas kordhin ah la galin weeraryahanka.
Isagoo la hadlayay Kicker Talaadadii wax ku saabsan xaaladda qandaraaska Lewandowski, Zaharvi wuxuu yiri: “Wali wax xiriir ah lama sameyn FC Bayern.”
Warbixin uu soo saaray saxafiga Fabrizio Romano ayaa lagu sheegay in Lewandowski aanu ku faraxsanayn xaaladiisa haatan isla markaana uu diyaar u yahay in uu isaga tago kooxda hadii aan loo soo bandhigin heshiis cusub xagaagan.